Manchester United Oo ku dhow saxiixyada Danny Rose Iyo Ivan Perisic
Friday, December 14th, 2018 - 00:56:45
Thursday August 10, 2017 - 22:09:11 in Wararka by
Manchester United ayaa dooneysa inay mar kale samayso isku-day ay ku doonayso laacibka baasha uga ciyaara Inter Milan ee Ivan Perisic toddobaadkan.
Warbaahinta ciyaaraha ee Manchester Evening News ayaa fahamsan in Jose Mourinho uu doonayo inuu ugu yaraan hal ciyaartoy kusoo kordhiyo kooxdiisa Manchester United ka hor inta aanu xidhmin suuqa iibka ciyaartoygu dhamaadka bishan, waxaana bartilmaameed u ah Ivan Perisic oo dhawr jeer oo hore ay ku hungoobeen, waxase isha macallinku ay wakhtigan haysaa difaaca bidix ee Tottenham ee Danny Rose.
Dhaawacyada ragaadiyey Luke Shaw iyo Ashley Young ayaa ku khasbaya tababare Jose Mourinho inuu raadsado ciyaartoy baasha bidix ee difaaca iyo mid weerarka uu raadsado.
Inter Milan oo ay Manchester ka dalbatay Perisic ayaa lala xidhiidhinayaa inay xiisaynayso ANthony Martial oo uu qayb ka noqdo heshiiska Perisic, laakiin United ayaan doonaynin in laacibkeedan da’da yar ee Faransiiska ah uu ka tago.
Dhinaca kale, Danny Rose oo aan ku qanacsanayn lacagta mushaharka ah ee uu ka qaato Tottenham ayaa la sheegay inuu doonayo inuu ka tago kooxdaas, waxaana albaabada u furtay Manchester United oo sidoo kale ka dooneysa Tottenham Eric Dier.
United waxa la filayaa inuu ka tago difaaca midig ee Timothy Fosu-Mensah oo amaah ugu biiraya Crystal Palace, balse waxa la saadaalinayaa in Serge Aurier oo difaaca midig uga ciyaara PSG uu iman doono.